ओलम्पिक २०२० : दोहोरियो गलत परम्परा, कसले दिन्छ गोपीचन्द्रलाई न्याय ?
ओलम्पिकमा सहभागी हुन नपाएका खेलाडी गोपीचन्द्रमाथि परेको मानसिक र आर्थिक क्षतिदेखि खेलकुद क्षेत्रमा फैलिएको नकारात्मक सन्देश मेटाउनै पर्छ, तर जिम्मेवार निकाय केही बोलेका छैनन्।
आज ओलम्पिकको उद्घाटन, गौरिका र एलेक्सले नेपाली झण्डा बोक्ने
विश्व खेलकूदको कुम्भमेला ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको औपचारिक रूपमा आज उद्घाटन हुँदै छ। जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजना हुने एक विशेष समारोहबीच अपराह्न ४ः४५ बजे उद्घाटन हुनेछ।
फूटबलर भण्डारीको खुट्टाको सफल शल्यक्रिया
स्टार फूटबल खेलाडी सावित्रा भण्डारीको खुट्टाको शल्यक्रिया सफल भएको छ।
इटालीले ५३ वर्षपछि जित्याे यूराे कप इंग्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै इटालीले यूरो कपको उपाधि जितेको छ।
यूरो कपको उपाधिका लागि इटाली र इंग्ल्यान्ड भिड्दै यूरो कपको उपाधिका लागि आज राति इटाली र इंग्ल्यान्ड भिड्न लागेका छन्।
मेसीले दिलाए २८ वर्षपछि अर्जेन्टिनालाई उपाधि लियोनल मेसीले २८ वर्षपछि अर्जेन्टिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय फूटबल प्रतियोगितामा ठूलो उपाधि दिलाएका छन्।
उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र ब्राजिल भिड्दै कोपा अमेरिका फूटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र ब्राजिल भिड्न लागेका छन्।
ईपीएल टी-२० प्रतियोगिता असोजमा हुने कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण स्थगित भएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) टी-२० प्रतियोगिता आगामी असोजमा हुने भएको छ।
सन्दीप लामिछाने ‘द हन्ड्रेड’ प्रतियोगिता खेल्न बेलायत जाँदै नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने ‘द हन्ड्रेड’ क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न आज बेलायत जान लागेका छन्।
यूरो कप : फाइनल प्रवेशका लागि इटाली र स्पेन भिड्दै यूरो कपको फाइनलमा प्रवेशका लागि आज राति इटाली र स्पेन भिड्न लागेका छन्।
कसले जित्ला यूरो कप? सेमिफाइलनमा पुगेका चारै टोली दाबेदार भए पनि ह्यारी केन र रहिम स्टर्लिङ लयमा रहेको र रक्षापंक्ति पनि बलियो भएकाले इंग्ल्यान्डको उपाधि जित्ने सम्भावना बढी छ।
पेरुलाई हराउँदै ब्राजिल कोपा अमेरिकाको फाइनलमा घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पेरुलाई पराजित गर्दै ब्राजिल कोपा अमेरिकाको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
यूरो कप : इटाली र स्पेन सेमिफाइनलमा प्रवेश
यूरो कपको गएराति भएका खेलमा बेल्जियमलाई हराउँदै इटाली र स्विट्जरल्यान्डलाई हराउँदै स्पेन सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।
माई सेकेन्ड टिचरद्वारा क्रिकेट टोलीलाई ५ लाख हस्तान्तरण गत वैशाखमा त्रिदेशीय क्रिकेट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उपाधि जितेको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई मुख्य प्रायोजक माई सेकेन्ड टिचरले प्रोत्साहनस्वरूप रू.५ लाख हस्तान्तरण गरेको छ।
राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण स्थगित कोभिड-१९ का कारण त्रिदेशीय शृंखला रोकिएपछि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण पनि स्थगित गरिएको छ।
नामिबिया र स्कटल्यान्डसँगको त्रिदेशीय शृंखला स्थगित नेपालले नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग खेल्ने तय भएको त्रिदेशीय शृंखला स्थगित भएको छ।